'घुस लिने र दिने दुवैलाई सजाय गर्नुपर्छ' | Citizen Post News
'घुस लिने र दिने दुवैलाई सजाय गर्नुपर्छ'
आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायाण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा भनेका छन्, घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन् । अर्कोतिर, मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचार निवारणका लागि एकमात्र सरकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्ट भयो ? कारबाही गर्ने निकाय अब कुन हुनसक्छ ? अख्तियारका जस्तो संवैधानिक अंगका रहेका आयुक्त र कर्मचारीमाथि कारबाही हुने कि नहुने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
७८ लाख घुस प्रकरणमा मुछिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु आफ्नो राजीनामा बुझाएका राजनारायण पाठकलाई के अब राजीनामा दिएकै भरमा चोख्याउने त ? अब सरकार र अख्तियारले कस्तो नजिर कायम गर्ला ? त्यो गम्भीर विषय मात्र नभई मुलुकलाई कता हिडाउने भन्ने अब सरकार र अख्तियारले लिने निर्णयले गर्नेछ ।
अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठकले दिएको राजीनामासँगै मुलुकमा अहिले ठूलो बहस सुरु भएको छ कि राजीनामा दिएकै भरमा उन्मुक्ति दिने कि थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने ? अर्कोतिर सामाजिक सञ्चालभर पाठकलाई राजीनामा दिएकै भरमा छोड्न नहुने र सरकारले कारबाही गरेर मिसायल कायम गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द भइरहेको छ ।
राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने निर्णयमा सरकार पुगेपछि आयुक्त पाठकले राष्ट्रपतिसामु राजीनामा बुझाएका थिए । उक्त घुस लिएको प्रकरणलाई उनले आफ्नो जीवनमा गरेको सबैभन्दा ठूलो भुल भन्दै स्विकारोक्ति सार्वजनिक भइसकेको छ । अब यो अवस्थामा पूर्वआयुक्त पाठकलाई सरकारले कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? सरकार र अख्तियारले कारबाही नगर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशिलता अपनाउने भन्दै अभिब्यक्ती दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको स्प्रीटमा ठेस पुग्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचारीलाई कदापी माफी गर्न नसकिने र कुनै पनि हालतमा कारबाही हुने अभिब्यक्ति दिँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार आरोपितसँग नै घुस खाएर पनि काम नगरेको तथा घुस लिएको स्विकार गरेको अडियो एकाएक भाइरल बन्यो । त्यसपछि राजनारायण पाठक नैतिक संकटमा परे । तर, राजनारायणले यदि कानुन विपरित घुस दिने मान्छेको काम गरिदिएको भए त्यो भिडियो कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक हुने थिएन ।
भक्तपुरस्थित रहेको नेपाल इन्जिनीयरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै पटकपटक ७८ लाख रुपैयाँ उनले घुस त लिए । आखिर आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि अडियो सार्वजनिक गर्नेलाई चाहिँ के अब दोष मुक्त गर्न मिल्छ ? अवैध कामलाई बैध बनाउन घुस दिने चाहिँ कसरी राम्रो हुनसक्छ ? के उसलाई सजायको भागिदार बनाउनु पर्दैन ? समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने हो भने घुस दिनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।
घुस दिएर अवैध कामलाई बैध बनाउने परिपाटीलाई बहिस्कृत गर्नका लागि भएपनि दुवैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउनु राज्यको कर्तत्व हो । अबको बाटो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले घुस लिने र दिने दुवैलाई कारबाही गरी नयाँ नजिर कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेश चरितार्थ हुनसक्छ । नयाँ युगको सुरुवात हुनसक्छ ।